Ozi kacha ọhụrụ banyere ego ụtụ isi si Nigeria & ụwa | TAA
NYSC na-ekwe nkwa inye ike iji kwụsị ọrụ enweghị ọrụ
Home Tags Ulo oru ugbo ala
Onu ogugu nke ndi isi ochichi nke bu Buhari na-akwanyere 'ude nke afo' - PDP
Ndi isi ochichi ndi mmadu (PDP) ekwuputala aha aha President Muhammed Buhari dika onye agha Afrika nke Afrika (AU) ndi agha na-eme ihe ike.
Òtù Na-ahụ Maka Ndị Ntorobịa Na-ahụ Maka Ụmụaka (NYSC) na Anambra na Monday kwere nkwa maka mmemme na ọzụzụ ike nye ndị òtù ọhụrụ nke òtù Corps iji kwụsị nsogbu nke enweghị ọrụ na mba ahụ.
Khama nke Botswana: Ọchịchị bụ ihe egwuregwu ruru unyi n'ụwa dum
Onye bụbu onyeisi oche Botswana, Ian Khama, kwadoro na ọ dịla anya a ga-eme ka ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụrụ egwuregwu ruru unyi. N'anya ya, agbanyeghị ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
General Gowon: Ana m ekpe ekpere Naijiria anaghị alụ agha obodo ọzọ
Onye isi oche nke mbụ, Gen. Yakubu Gowon, kwuru na ya na-ekpe ekpere na Naijiria anaghị aga agha ọzọ.
Ekiti guber: Uche Secondus, David Mark na-eduga ndị udo na ndị uwe ojii na Ekiti
Onye isi oche mba nke Peoples Democratic Party, Prince Uche Secondus, na onye bụbu onye isi oche nke Senate, David Mark, na Wednesday mere ka otu ndị agha gaa Ekiti State iji mesighachi ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-achọ ndị nweere onwe ha, nke ziri ezi ma bụrụ ndị a kwenyere.
Nasarawa gbuo: Gọvanọ Al-Makura condoles na ndị uweojii na-efu ndị ọrụ nche
Gov. Umaru Al-Makura, nke Nasarawa State, emeela ka ndi uweojii na Naijiria kpuchie onu ogugu ndi isi ato na mbuso agha na nso nso a na steeti.
A kọrọ na Apple na-ebute ọrụ ozi ndebanye aha
Apple nwetara "Netflix nke magazin" n'ọnwa gara aga, ma ugbu a, ọ na-eme atụmatụ ịmepụta ọrụ ozi ọma ya.